စက်ရုပ်နဲ့အတူ အရက်သောက်ကြမလား? - JAPO Japanese News
ဂါ 07 Dec 2021, 15:48 ညနေ
ယနေ့ခေတ်မှာ စက်ရုပ်တွေဟာဆိုရင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အိမ်အတွင်းမှာ စတင်ဝင်ရောက်နေရာယူနေကြပါပြီ။
ဥပမာပြရရင် ဒီလို သန့်ရှင်းရေးလုပ်စက်လုပ်မျိုးပေါ့။
အခန်းတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးသွားတဲ့ အဆင်ပြေတဲ့စက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လှေကားစတဲ့နေရာတွေမှာတော့ အသုံးပြုဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်ကို ဒီစက်ရုပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ချိန်ညှိပြီး ပြင်ဆင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး။ ဒီလို စက်ရုပ်အိမ်မွှေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ အတော်လေးကြီးပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ ကြောင်အစစ်၊ ခွေးအစစ်တွေကလည်း ဈေးကြီးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန် ကုန်ကျရမယ့် ဈေးနှုန်းကို စဥ်းစားကြည့်ရင် စက်ရုပ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကတောင် ပိုဈေးသက်သာသလိုဖြစ်လာမယ့်ခေတ်ကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်များမှာ စက်ရုပ်ကို ခေါ်ပြီး အပြင်ထွက်လည်တဲ့ခေတ်များ ဖြစ်လာမလားမသိဘူးနော်။
အရက်ဆိုင်များစွာကို ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ယိုရိုးနော့တခိအုပ်စုလက်အောက်ခံ “ အစ်ခန်းမဲ့ဆခဘ” ကတော့ စက်ရုပ်ကိုအတူခေါ်ဆောင်လာခြင်းကို လက်ခံပေးတဲ့ ပထမဆုံးအရက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက ခွင့်မပြုထားဘူးလားဆို အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလိုစက်ရုပ်ကို ခေါ်ဆောင်လာခွင့်ပြုတယ်လို့ ကြေညာခြင်းအားဖြင့် သာမန်အရက်ဆိုင်မှာလည်း စက်ရုပ်ကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ ဖြစ်စေလိုတဲ့ပုံပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး စက်ရုပ်နဲ့အတူ စားပွဲမှာ အတူဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ပြီး အရက်သောက်နိုင်ပါတယ်။
ပုံကစက်ရုပ်လေးကတော့ Softbank က ရောင်းချတဲ့စက်ရုပ် Papper ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ထဲမှာလည်း အလုပ်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတဲ့ စက်ရုပ်များစွာ ရှိနေပါတယ်။
ဒီဆိုင်မှာ စက်ရုပ်တွေကို စတင်အသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ Robot Friendly ပရောဂျက်ကို ထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပရောဂျက်ဟာ အိုအိုတ တိုမိုမိဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပရောဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အထက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Papper နဲ့အတူ ၇ နှစ်ကြာ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး လူသားနဲ့စက်ရုပ်တို့ အတူယှဥ်တွဲနေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုသေတနပြုလုပ်နေပုံရပါတယ်။
အိမ်တွင်းမှာ စတင်ထားရှိလာကြတဲ့စက်ရုပ်တွေက နောက်ပိုင်းမှာ အိမ်အပြင်ဘက်မှာလည်း အသုံးချလာနိုင်ပါတယ်။
စက်ရုပ်ခွေးကို လမ်းခေါ်လျှောက်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့လည်း မပြောနိုင်ပါဘူး။
အပေါ်က အရက်ဆိုင်မှာတော့ တခြားစားသောက်သူတွေကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဘယ်လိုစက်ရုပ်မျိုးကို ထားရှိမလဲဆိုတာ စဥ်းစားသုံးသပ်နေဆဲဖြစပါတယ်။
ဆိုင်ထဲကို ဝင်ရောက်တဲ့အခါ လူတွေက အပူချိန်တိုင်းတာနဲ့ လက်ကို လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ဆေးပြီး ပိုးသတ်တာတို့လုပ်နေပေမယ့် စက်ရုပ်တွေကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
စက်ရုပ်တွေအတွက် အပူချိန်တိုင်းဖို့တော့မလိုအပ်ပေမယ့် အယ်လ်ကိုဟောပိုးသတ်ဆေးနဲ့ကျတော့ ဘယ်နေရာထိ ပိုးသတ်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာမှာ တခြားစားသောက်သူဧည့်သည်တွေရဲ့ အမြင်လည်းရှိတဲ့အတွက် ပိုးသတ်ဖို့တော့ သေချာပေါက်လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အယ်လ်ကိုဟောဖြန်းလိုက်လို့ စက်ရုပ်ပျက်သွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရပြန်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စက်ရုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုစက်ရုပ်လိုချင်လဲလို့ ကျွန်တော့ကို မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်ကတော့ မြင်းပုံစံစက်ရုပ်လိုချင်ပါတယ်။ မြင်းစီးပြီးတော့ အလုပ်တက်ချင်လို့ပါ။
စာဖတ်သူတို့ လိုချင်တဲ့စက်ရုပ်ကရော ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ?
ကိုရိုနာပြီးရင် Camping Car နဲ့ အလည်သွားရအောင်
7 လပိုင်း၊ 11 ရက်နေ့7ELEVEN မှာ 711 ယန်းဖိုးဈေးဝယ်ကြတာ Trend တစ်ခုလား ?!!!!!
တိုက်လေယာဥ်တွေမှာသာမက ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာပါတွေ့နေရတဲ့ Stealth နည်းပညာ